ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအနုညာတစီရင်: နယူး Developments
နေအိမ် / ဆွစ်ဇာလန်အနုညာတစီရင် / ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအနုညာတစီရင်: နယူး Developments
15/01/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအနုညာတစီရင်ပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံတကာဥပဒေပေါ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်, နောက်ပိုင်းအင်အားအတွက် 1989 နှင့်တစ်ကြိမ်ပြင်ဆင်, တွင် 2011.
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက, အပေါ် 11 ဇန္နဝါရီလ 2017, ဆွစ်ဇာလန်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံတကာဥပဒေပေါ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုအခြို့သောအရေအတွက်ကအဆိုပြုတဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပါဝင်သည်သော.
ထုတ်ဝေခြင်းမပြုမီ, ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ Gabrielle Kaufmann-Kohler အပါအဝင်ကျွမ်းကျင်သူများက၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးနှင့်တိုင်ပင်, ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်မှ Levy Kaufman-Kohler နှင့်ပါမောက္ခမှာစတင်တည်ထောင်သူ Partner, ဇူးရစ်တက္ကသိုလ်ကနေပါမောက္ခဖေလဇ်မင်း Dasser, ဂျီနီဗာရှေ့နေ Elliott သည် Geisinger, Lucerne တက္ကသိုလ်နှင့်ပါမောက္ခဒံယလေသ Girsberger, နှင့်ဆွစ်ဇာလန်မှာတည်ရှိပါတယ်အများအပြားခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့အတူ (တနည်း, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဆွစ်ဇာလန်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်း, အားကစားများအတွက်ဆွစ်ဇာလန်ကုန်သည်များ '' အနုညာတစီရင် Institution မှနှင့်အနုညာတစီရင်၏တရားရုံး).
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိမှလေးစားမှုနှင့်အတူပြင်ဆင်ချက်ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းစင်တာအဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်လုံခြုံရေး၏အဓိကရည်မှန်းချက်ရှိတယ်. သူတို့ကဆွစ်ဇာလန်ဥပဒေပြဌာန်းမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်နေကြပါတယ်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိမျက်နှာသာနှင့်ဆုံးဖြတ်ဖို့ပါတီများ '' ရည်ရွယ်ချက်စှဲ.
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ပထမဦးဆုံး "အကြံပြုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေစဉ်ပြည်တွင်းဆွစ်ဇာလန်ခုံသမာဓိအရပ်ဘက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ကုဒ်အတွက်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကအုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်မထွက်ရ "နှစ်ခုကွဲပြားမှုကိုပယ်" စနစ်အားထိန်းသိမ်းခြင်း."
အဆိုပါပြင်ဆင်ချက်ထို့နောက်ပါတီများသူတို့ကိုယ်သူတို့ enable ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့ပဌနာ, ခုံရုံးအပြင်လက်ရှိတွင်အမှုဖြစ်သကဲ့သို့, ခုံသမာဓိခုံရုံးအားဖြင့်ခွင့်ပြုကြားဖြတ်အစိုးရကယ်ဆယ်ရေးပြဋ္ဌာန်းရန်မှ file မှ, အရာအရေးပါသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလိမ့်မယ်.
သူတို့ကအစခုံသမာဓိသဘောတူညီချက်များများအတွက်တရားဝင်လိုအပ်ချက်များကို liberalizing နှင့်ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာခုံသမာဓိသဘောတူညီချက်များတစ်ဖက်သတ်လုပ်ရပ်များမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ခုံသမာဓိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးရည်ရွယ်ထား, အရာအထူးသဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်မှာတည်ရှိပါတယ်အားကစားများအတွက်အနုညာတစီရင်၏တရားရုံးပေါ်တွင်အားသာချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်.
သူတို့ကအစဆွစ်ဇာလန်ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာခုံရုံးမတိုင်မီအင်္ဂလိပ် FILE ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု.
အချို့ခုံသမာဓိလူကြီးအဆိုပြုထားသည့်ပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပေမယ့်, တချို့ယောဂီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအရေးပါကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးခုံသမာဓိထိုင်ခုံအဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအန်တရာယျနှင့်အတူအတိမ်အနက်အတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမရေတွက်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် 30 တစ်ဦးအပြည့်အဝ-အကြောင်းပြချက်အကျဉ်းနှင့်အတူအယူခံနေ့အချိန်၌-န့်သတ်ချက်.
တွင် 2014, ဥရောပပါလီမန်ကလေ့လာမှုကိုအခြားဥရောပပြည်နယ်အတွင်းရှိခုံသမာဓိမှပိုမိုနှစ်သက်ခံရဖို့ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ခုံသမာဓိကိုတွေ့, ဤပြင်ဆင်ချက်နောက်ထပ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခုံသမာဓိ၏ status မြှင့်တင်ရန်ဖွယ်ရှိပုံပေါ်.
Aurelie Ascoli, Aceris ဥပဒေ SARL
PDF ကိုဖိုင်ကို Download .
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ဆွစ်ဇာလန်အနုညာတစီရင်